अचानक मोटोपन बढ्यो ? अपनाउनुहोस् यी प्राकृतिक तरिका:: Naya Nepal
अचानक मोटोपन बढ्यो ? अपनाउनुहोस् यी प्राकृतिक तरिका
मोटोपन अहिले धेरैका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यद्यपि मोटोपन क्रमिक रुपमा बिस्तारै बढ्छ, जुन हाम्रो खानपान र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ । जबकि अचानक पनि मोटोपन बढ्न सक्छ ।
मानौं, तपाईंको खानपानमा खास परिवर्तन छैन । जीवनशैली उस्तै छ । जंकफुड वा तारेको, भुटेको खानेकुरा पनि त्यति खानु भएको छैन । दिनभर सुत्ने काम पनि गर्नुभएको छैन । तर अचानक मोटोपन बढ्यो, किन ?
यसरी मोटोपन बढ्नुमा भौतिक वा शारीरिक कारण मात्र नहुन सक्छ । भावनात्मक कारणले पनि मोटोपन बढ्न सक्छ।
जहिले पनि धेरै खानेकुरा खाएकाले मोटोपन बढ्छ भन्ने छैन । ऐश-आरामपूर्ण जीवनको कारण मात्र पनि मोटोपन बढ्छ भन्ने छैन । कुनैबेला यावत कारणविना नै मोटोपन बढ्न सक्छ । खासगरी यसमा हाम्रो भावनात्मक स्वस्थ्य जोडिएको हुन्छ । हामीमा पैदा हुने भावनात्मक स्थितिको सोझो असर शरीरमा पनि पर्छ। त्यसैले स्वस्थ्यका लागि शरीर मात्र होइन भावनात्मक स्थिति पनि ठिक हुनुपर्छ।
मोटोपन नियन्त्रणका दश प्राकृतिक तरिका
मोटोपन कसरी घटाउने रु धेरैले आफ्नो खानपानमा कटौती गर्छन् । कति कडा शारीरिक श्रम गर्छन् । व्यायाम गर्छन्, जीम धाउँछन् । यद्यपि सन्तुलित जीवन अपनाएर प्राकृतिक रुपमा पनि मोटोपन घटाउन सकिन्छ ।
–स्वस्थ्य खानपान पहिलो सूत्र हो । दिनभर थोरैथोरै खाना खाने । एकसाथ धेरै खानेकुरा सेवन गर्दा पनि मोटोपन बढ्छ।
–बिहान चाँडै उठ्ने । उठेपछि कागती र मह मिसाएको पानी पिउने । यदि तपाईंलाई कोलेस्ट्रल कम गर्नु छ भने तातो पानीमा दालचिनी पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ । मधुमेह नियन्त्रण गर्ने हो भने मेथी दाना भिजाएर राख्ने र त्यसैको पानी सेवन गर्ने । साथसाथै यी पेयले मोटोपन घटाउन पनि सहयोग गर्छ ।
–अंकुरित गेडागुडी, दूध, अन्डा, ड्राइ फ्रुट्स आदिलाई बिहानको नास्तामा सामेल गर्न सकिन्छ ।
–बिहान नास्ता खाइसकेपछि जब भोक लाग्छ, खाना खानुभन्दा अघि थोरै फलफूल सेवन गर्नु उचित हुन्छ । यसले तपाईंलाई भिटामिनका साथसाथै मिनरल्स पनि प्रदान गर्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । फलफूलको सेवन कम क्यालोरीमै भरपुर पोषण पनि मिल्छ ।
–खानामा दाल, सलादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । मौसम अनुकूल सलादलाई हरेक छाकमा सामेल गर्नु उचित हुन्छ ।
–साँझको खाना हल्का र सुपाच्य हुनु जरुरी छ । सकेसम्म झोलयुक्त खानेकुरा, सागसब्जीको रस, फलफूल सेवन गर्नु उचित हुन्छ ।
–साँझको खाना खानसाथ सुत्ने वा आराम गर्ने, टिभी हेर्ने, मोबाइल चलाउने जस्ता गतिविधि त्याग्नुपर्छ । साँझ खाना खाएर हल्का हिँडडुल गर्नु उचित हुन्छ ।
–पर्याप्त निद्रा जरुरी हुन्छ । नियमित ७ देखि ८ घण्टासम्मको गहिरो निद्रा लिनुपर्छ।
–दिनभर एकै स्थानमा बसिरहने नगरौं । केही न केही सानोतिनो काम गर्ने वा शारीरिक श्रम गर्ने गरौं । आफ्नो काम सकेसम्म आफैँले गरौं ।
–बगैंचाको काम, खेतीको काम वा कुनै पनि किसिमको शारीरिक काम गर्नु उचित हुन्छ।
व्यायाम गर्दा गर्दै नगर्नुहोस् यी गल्ती
काठमाडौँ । शारीरिक स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीका लागि व्यायाम गर्नु सही हो । हामी भन्छौं, नियमित व्यायाम गरौं रोग लाग्दैन । हुन पनि व्यायामले शरीरलाई निरोगी बनाउँछ, बलियो बनाउँछ । तर व्यायामको ढंग पुगेन भने त्यसबाट लाभ होइन उल्टै हानी हुन्छ ।
व्यायामको अनेक विधि हुन्छन् । त्यसैले कुन किसिमको व्यायामबाट कस्तो लाभ मिल्छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ । सबै किसिमको व्यायाम आफ्नोलागि उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुराको ख्याल राख्नुपर्छ ।
अहिले हामी स्वास्थ्यप्रति जागरुक छौं । सचेत छौं । त्यहीकारण समय मिलाएर भएपनि नियमित रुपमा व्यायाम गर्न चाहन्छौं। व्यायामको लागि विहानको समय सर्वोत्तम हो ।
हुन त अरु समयमा पनि व्यायाम गर्न सकिन्छ । यद्यपि बिहानको समय जस्तो अनुकुल अरु समयमा हुँदैन । व्यायाम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के पनि हो भने सहज हुने पहिरन लगाएर, सहज ठाउँमा गर्नुपर्छ । खुला वा ताजा हावा आउजाउ गर्ने ठाउँमा व्यायाम गर्नु राम्रो हो ।
प्रायले व्यायाम गर्दा संगीत सुन्ने वा साथीहरुसँग कुराकानी गर्दै पनि व्यायाम गर्छन् । व्यायाम गर्दा सकेसम्म आफैंमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ ।
कुन किसिमको व्यायाम कसरी र कति समय गर्ने भन्ने कुरामा आफूले ख्याल राख्नुपर्छ । किनभने जथाभावी गरिने व्यायाम प्रभावकारी नहुनेमात्र होइन, शरीरका लागि हानिकारक पनि हुनसक्छ ।
व्यायाम गर्नुअघि वामअर्प अनिवार्य छ, ताकि तपाईंको शरीर व्यायामको लागि पूर्णरुपमा तयार भएको होस् । यदि व्यायाम गर्नुअघि वार्मअप गर्नु भएन भने तपाईंले हानी पनि व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ ।
तपाईंले व्यायाम जुन र्फम अर्थात प्रकारको गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई नियमअनुसार गर्नुहोस् । अर्थात एकदमै विधिपूर्वक व्यायाम गर्नुपर्छ ।
जुन व्यायाम, जसरी, जुन गतिमा गर्नुपर्ने हो सोही ढंगले गर्नुपर्छ । आफ्नो हिसाबले फेरबदल नगर्नुहोस् । अन्यथा तपाईंको शरीरका लागि यो हानिकार पनि हुनसक्छ ।
यदि व्यायाम गर्ने सुरसारमा हुनुहुन्छ र यसअघि गर्नुभएको छैन भने केही कुरामा सतर्कता अपनाउनुहोस् । सुरुको दिन अति धेरै व्यायाम नगरौं । ट्रेनरको सुझावअनुसार नै व्यायाम गरौं । सप्ताहमा जति व्यायाम गर्नुपर्ने हो, सोभन्दा बढी व्यायाम गरिएमा शरीरलाई हानी हुन्छ ।
व्यायाम गर्नु सबै उमेरका लागि फाइदाजक छ । यद्यपि कुन किसिमको व्यायाम गर्ने, कुन गतिमा गर्ने भन्ने कुराचाहिँ उमेरले पनि निर्धारण गर्छ ।
त्यसैले व्यायाम गर्नुअघि विज्ञसँग परामर्श लिएर मात्र व्यायाम सुरु गरौं । यदि तपाईंमा स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै समस्या भएमा चिकित्सकको परामर्श लिन आवश्यक छ।
हरेक दिन यसरी लिनुहोस् बाफ, मिल्छन् यस्ता फाइदै फाइदा
काठमाडौँ । चिसो होस् वा छालाको हेरचाह गर्न वाफ एक धेरै राम्रो प्रक्रिया हो । कुनै साइड इफेक्ट नहुने र स्वास्थ्यको फाइदा वाफको बारेमा चर्चा गर्नेछौ ।चिसोमा वाफ लिनु भनेको रामवाण जस्तै उपाय हो । वाफ लिनाले चिसो मात्र ठिक नबनाई घाँटीमा जमेको कफलाई कुनै समस्या बिना नै सजिलै हटाउछ ।
वाफले अनुहारको मृत छाला हटाउन र झिम्का कम गर्ने एक समाधान हो । यसले छालालाइृ ताजा बनाउछ र स्फुर्ति बढाउछ । जसले छालाको ओस पनि राख्छ ।यदि अनुहारमा डन्डिफोर भएमा वाफ लिनु राम्रो उपाय हो । यसले गन्ध र सेबमलाई सजिलै छुटकारा दिन्छ । यसले छाला सफा गर्दछ ।